Goobaha Wicitaanadaada Waxqabad | Martech Zone
Waxaan had iyo jeer ku tijaabineynaa Wicitaanada Waxqabadka boggeena iyo macaamiisheenna. Tani waxay noqon kartaa boosteejo aasaasi ah, laakiin waxaa jira dhowr meelood oo lagu bixin karo waddo kaqeybgalka websaydhka caadiga ah. Waxaan ku dhiirrigelin lahaa shirkadaha inay barnaamijyadan uga dhigaan mowduucyadooda maareynta maadooyinka si ay ugu fududaato ganacsiyada inay ku daraan, cusbooneysiiyaan, oo ay tijaabiyaan wicitaanno kala duwan oo waxqabad ah. Goobaha CTA ee bartaada:
Goob ballaaran - haysashada meel isdaba-joog ah oo ka socota bog ilaa bog halkaas oo adeegsadaha uu filan karo inuu arko wicitaan ficil ah waa muhiim. Tani waxay noqon kartaa guddi ka kooban bog, guddi hoos u dhacaya / kor u kaca (sida badan guddigayaga diiwaangelinta), ama popover div. Baadhid Biyaano Flash oo waxaad arki doontaa guddi ka hooseeya cagtiisa barta oo u socota Isqor Maanta.
Dhexdhexaadiye - dadku waxay ku sawiraan bogagga qaabka F bidix ilaa midig. CTA dhinaceeda waa hab wanaagsan oo lagu soo jiito aragtida dadka markay wax ku akhriyaan shaxanka bogga. Dhibcaha gunnada haddii aad sii wadi karto wicitaanka ficilka ee ku habboon waxyaabaha dhabta ah laftiisa. Waxaan ku dhejineynaa CTAs dhinacayaga oo si firfircoon ayaa loo daabacay iyadoo kuxiran qaybta boostada lagu daabacay.
Durdur - waa waxoogaa carqalad badan, laakiin u yeerista wicitaanka waxqabadkaaga dhexdeeda, ha ahaato xiriiriye, badhan ama CTA, ayaa xaqiijin kara in la arkay. Nidaamyada maaraynta maaddooyinka badankood waxay kuu oggolaanayaan inaad sifeeyaan waxyaabahaaga, sidaa darteed waxaad ku dari kartaa wicitaan ficil yar oo tags ah ama kahor ama kadib boggaaga.
Hubso inaad inbadan aqriso fahamka F-Layout ee Webdesigntuts +:
Waxaan ku aragnay natiijooyin cajaa'ib leh guddigayaga diiwaangelinta ee hoos u socda Martech Zone. Waa fuliyaa in kabadan 400% sifiican marka loo eego wicitaankeena qulqulka ah ee loogu talagalay waxqabadka saldhigga boostadayada. Waan hubaa inay jiraan waxoogaa isbeddelo ah oo aan tijaabin karno si aan u hagaajino natiijooyinka, laakiin xogta hordhaca ah waxay bixisaa xog in inteynaan carqalad badnayn aan nahay, natiijada ka sii wanaagsan. Waxaan u janjeeraa inaan ku tiirsanaano dhaqankan madaama aanan dooneyno inaan runti lumino dhagaystayaasheena maxaa yeelay waxaan ku dharbaaxeynaa xayeysiinta meel walba… laakiin waa xusid mudan.
Tags: wac talaabougu wac goobta waxqabadkactaraadinta indhahaf qaabayntawicitaanka durdurinta ficilladaxayeysiiska khadadka ahwicitaan guud ahaan ficillada
Qiyaasta iyo Waxyaabaha Aan Waxba Ka Qaban ee Suuqgeynta Mawduuca
Oktoobar 10, 2013 at 8:29 PM
waa kuwee plugin aad u isticmaashay si aad u hesho bar optin ah ee aad ugu sareysa ee blog?
Oktoobar 15, 2013 at 9:33 AM